Fotodrafitrasa ho an'ny Akany fitaizana zaza kamboty eo anivon'ny Zandarmariam-pirenena | Primature
Fotodrafitrasa ho an’ny Akany fitaizana zaza kamboty eo anivon’ny Zandarmariam-pirenena
Lapan’i Mahazoarivo, 14 Oktobra 2021- Tonga nanome voninahitra ny lanonana fanolorana ny fahavitan’ny fotodrafitrasa natokana hikolokoloina sy hanabeazana ireo zanaky ny Zandary lavo teo ampanatanterahana ny asany, eo anivon’ny « Centre Orphelinat de la Gendarmerie Nationale », Arivonimamo, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Nidera ny finiavana sy ny fandraisana andraikitra eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena fa indrindra ny Minisitra mpiahy ny Akany ny tenany. Tamin’izany no nanambarany fa tsy amin’ny sehatry ny fandriampahalemana sy ny filaminana ihany ny ezaka ataon’ny Zandarmariam-pirenena, fa eo ihany koa ny fanomezan-danja manokana ny fampiroboroboana ny mahaolona ho an’ny zanaka malagasy, mila fanampiana manokana hoy izy ireo zaza kamboty ary porofon’izany ny fahazahoana izao fotodrafitrasa izao. Ezaka ataon’ny fitondram-panjakana rahateo ihany koa ny fanomezana tosika ny sehatry ny fanabeazana sy ny fahasalamana.
Nankasitraka ireo mpiara-miombon’antoka izay nifarimbona ka nahazoana ny fotodrafitrasa ny Praiminisitra, ary nanambara fa « tanjona iombonana ny fijerena ny mahaolona, tsy amin’ny sehatra raisin’ny fanjakana an-tanana ihany, fa ireo rantsamangaika ihany koa dia manana adidy sy andraikitra amin’izany ».
Tsara ny manamarika fa feno 8 taona amin’ity taona ity ny Akany raha toa ka tamin’ny taona 2013 no niorina teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ary 73 isa ireo kamboty beazina ao, izay 6 ka hatramin’ny 21 taona, 27 amin’ireo zazavavy ary 46 kosa zazalahy.
Fotodrafitrasa ho fanampin’ireo efa misy eo an-toerana izao notokanana izao ary nanolotra 5 tapitrisa ariary avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, ny Praiminisitra, Ntsay Christian, ho fanampiana ny ivontoerana mikarakara ireto kamboty.
← Conseil du gouvernement du Mercredi 13 Octobre 2021
Andro iraisam-pirenena momba ny tandindon-doza sy loza voajanahary →
Standard & Poor’s : Une notation inaugurale de B-/B pour Madagascar